को बन्ला अब फिफाको अध्यक्ष ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
को बन्ला अब फिफाको अध्यक्ष ?
१५ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार १०:४४ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ जेठ १५ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)को नयाँ नेतृत्व चयनको लागि शुक्रबार (आज) निर्वाचन हुँदैछ । लगातार पाँचौपटक फिफा अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका ब्लाटरलाई यसपटक जोर्डनका युवराज अली बिन अल हुसैनले टक्कर दिएका छन् ।
७९ वर्षीय स्वीस नागरिक ब्लाटर र ३९ वर्षीय अरबी धनाढ्य हुसैनबीचको यो टक्करलाई खेल जगत मात्रै नभएर सिंगो विश्वलेनियालिरहेको छ । फिफाका २ सय ९ सदस्य राष्ट्रले चुनावमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सबै सदस्य राष्ट्रलाई एक मत खसाल्ने अधिकार प्राप्त छ ।
अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन दुई तिहाई मत ल्याउन आवश्यक छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनैपनि उम्मेदवारले दुई तिहाइ मत ल्याउन नसके दोस्रो चरणको भोटिङ हुनेछ । त्यसमा भने साधारण बहुमत ल्याएपनि फिफा अध्यक्षमा निर्वाचित हुन सकिनेछ । यसको लागि १ सय ५ भोट आवश्यक पर्छ ।
विश्व फुटबलका ज्ञाताहरु यसपटक फिफाको इतिहासमै कडा प्रतिस्पर्धा हुने बताइरहेका छन् । युरोपेली फुटबल महासंघ युएफाले जोर्डनका युवराज हुसैनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
ब्लाटरले नै चुनाव जितेको खण्डमा युएफाका केही सदस्य राष्ट्रले फिफाको सदस्यता त्याग्ने अध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीले बताएका छन् ।
उता, एसियलाी फुटबल महासंघ (एएफसी) र अफ्रिकी फुटबल महासंघ (सिएएफ)ले ब्लाटरलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् ।
यस्तोमा मध्य तथा उत्तर अमेरिकी समूह कोन्काकाफ, दक्षिण अमेरिकी समूह तथा ओसियाना समूहको भोट निर्णयक हुने बुझिएको छ ।
फिफाको संगठनात्मक ढाँचाअनुसार अफ्रिकी फुटबल महासंघसँग सबैभन्दा बढी ५६ भोट छ ।
यसैगरी, युरोपेली फुटबल महासंघसँग ५४, एसियाली फुटबल महासंघसँग ४७, मध्य तथा उत्तर अमेरिकी समूह कोन्काकाफसँग ४१, ओसियाना समूहसँग १४ तथा दक्षिण अमेरिकासँग १० भोट रहेको छ । – See more at: http://imagekhabar.com/samachar/detail/48293/31/.meroml#sthash.Knn7JZY4.dpuf